Nhau - Chinyorwa clutch chinoshanduka rini? Tinofanira kuteerera kune izvi zvitatu zviitiko
Akaputsa & batira Cylinder
Chinyorwa batira chinoshanduka riini? Tinofanira kuteerera kune izvi zvitatu zviitiko
Bhata batira Chinyorwa hutachiwana ndezvavanoshandisa zvinhu. Nekushandisa kwemota, iyo clutch ndiro ichapfeka zvishoma. Kana iko kupfeka kwasvika kune imwe nhanho, inoda kuchinjwa. Tingaite sei kuziva kuti batira ndiro inofanira kuchinjwa? Zvinoenderana nezvakaitika zvakapfuura, ini ndinofunga mamiriro anotevera anonyanya kuratidza kuti ndiro yekubatira inofanira kuchinjwa.
1. Chinobatira chinorema, uye manzwiro ekuparadzanisa haasi pachena
Kana iwe ukaona kuti mubato wekubatira unorema kupfuura pakutanga, uye iwe unogona kusimbisa kuti hapana dambudziko nekutapurirana kubva kune clutch pedal kuenda ku clutch, zvinokwanisika kuti ndiro yekubatira yakatetepa.
Nekuti iyo clutch ndiro yakaiswa pakati peiyo flywheel uye yekumanikidza ndiro, kana clutch ndiro iri gobvu kwazvo, iyo yekukweshera ndiro yeiyo yekumanikidza ndiro inotsigirwa ne clutch ndiro, uye yekukuya ndiro chitubu kune imwe mugumo ichasimbiswa yakanangana ne mukati. Panguva ino, zviri nyore kwazvo kutyaira iyo yekukuya ndiro chitubu nekutsika pane batira. Zvakare, iyo pedal iri nyore uye inorema, uye pane kushomeka kudiki panguva yekuparadzaniswa, nepo chitiviri chiri chakanyanya kureruka usati wapatsanurwa uye mushure mekuparadzana.
Kana iyo clutch ndiro ikava yakatetepa, iyo yekukweshera ndiro yemhepo yekumanikidza inoenda mukati, ichikonzera iyo yekugaya ndiro chitubu kutenderera kunze. Nenzira iyi, kana uchitsika pane batira, diaphragm chitubu inoda kusundirwa kuti ifambe nhambwe, uye simba redhayaphramu chitubu harikwani kusimudza ndiro yekumanikidza pakatanga kutamiswa. Chete kana iyo yekugaya ndiro chitubu yakatsikirirwa kusvika kune imwe nhanho panogona kumanikidzwa ndiro. Saka panguva ino, batira bhaudhi ichave inorema kwazvo, uye kunzwa kwekuparadzaniswa nguva kwakanyanya, zvisingaite.
Kana chiitiko ichi chikaitika, mushure mekubvisa zvimwe zvikonzero, zvinogona kutongwa kuti ndiro yekubatira yakatetepa, asi haifanirwe kutsiviwa panguva ino, nekuti ingori yakatetepa, uye haina basa nebasa rakajairika. Kunze kwekunge iwe uchinzwa kuti chitiviri chakanyanya kurema uye usingade kutsika pachiri, unogona kufunga kuchitsiva, zvikasadaro hazvizove dambudziko kune imwe nguva yenguva.
2. Clutch inobvisa nhanho shoma
Ndokunge, batira yekubatanidza poi yakakwira. Nekuti iyo clutch ndiro yakaiswa pakati peiyo flywheel uye yekumanikidza ndiro, iyo yechisimba simba yekumanikidza ndiro yekugaya ndiro inosundira iyo yekumanikidza ndiro kukwesheni ndiro yekutsikirira iyo clutch ndiro zvine simba pane iyo flywheel. Iyo mukobvu iyo clutch ndiro ndeye, iyo yakakura deformation yeiyo yekumanikidza ndiro yekugaya ndiro chitubu iri, uye yakakura iyo yekunamatira simba iri. Iyo yakatetepa iyo clutch ndiro ndeyekuti, iyo diki deformation yeiyo yekukuya ndiro chitubu iri uye idiki iyo yekunamatira simba iri. Saka kana ndiro yekubatira yakatetepa kune imwe nhanho, simba rekuchinjisa replate yekumanikidza pariri yakatambanudzwa. Ukadzvanya padiki batira zvishoma, batira inoparadzana.
Saka kana iwe ukaona kuti chinobatira chitiviri chinenge chakasununguka kusvika kumagumo paunotanga, mota haifambe, kana batira ichapatsanuka kana iwe ukatsika pane clutch pedal zvishoma, izvo zvinonyanya kukonzerwa nekupfeka kwakanyanya kweiyo batira ndiro. Panguva ino, ndiro yekubatira inofanira kutsiviwa nekukurumidza sezvazvinogona, nekuti panguva ino, ndiro yekubatira yatove yakatetepa. Kana ikaramba iine ivhu, iwo akasungirirwa rivets eiyo batira ndiro ichave pasi uye yekumanikidza ndiro ichakuvadzwa.
3. Clutch kutsvedza
Ini handidi kuunza izvi. Bhandi reclutch rakatetepa. Iyo yekumanikidza ndiro uye flywheel haigone kuendesa simba kwazviri zvakajairika. Usazeze panguva ino, ichinje nekukurumidza sezvazvinogona. Nekuti hazvizongokuvadza yako yekumanikidza ndiro, asi zvakare zvinotyisidzira zvakanyanya kutyaira kuchengetedzeka. Fungidzira iwe wagadzirira kupfuura pamugwagwa, tsoka yemafuta anorema yadzika pasi, batira yakasvetuka, injini inomhanya ichiridza muridzo, uye iyo yekumhanyisa mota haina kufamba, zvinotyisa.
Iyo yekutanga mashandiro e clutch slip haina kujeka, uye haigone kunzwikwa kana uchityaira mune yakaderera giya. Inogona kungonzwika chete kana uchityaira mune yakakwira giya uye uchitsika pane iyo yekuwedzera. Nekuti batira haidi kuendesa yakawandisa torque kana uchityaira mune yakaderera giya, uye batira mutoro wakakura kana uchityaira mune yakakwira giya, saka zviri nyore kutsvedza.
Post nguva: Jan-18-2021
Zvinyorwe kune tsamba yedu
Kero: Kamuri 1901, imwe Tsika Plaza, No. 1349 Liyuan North Road, Haishu, Dunhu, Ningbo, Zhejiang, China
Runhare: +86 574 87628775